Azikho yini izivunguvungu eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kungani kungekho ziphepho eSpain
USergio Gallego | | Iziphepho
ISiphepho uMatthew sasiyisiphepho sokugcina esidale umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo kanye nomuntu emgodini wase-Atlantic. Kusukela ngoJuni 1 kuya kuNovemba 30, le ndawo ihlushwa enye yezimo zomkhathi ezonakalisa kakhulu emhlabeni wonke: iziphepho.
Impela kulezi zinsuku uzibuze umbuzo wokuthi kungani eSpain kungenaziphepho noma yiziphi izinto ezifanayo ezifana neziphepho noma izivunguvungu.
Iziphepho zihlukaniswa ngezigaba, kanti ezinhlanu ziyingozi kakhulu futhi zidala umonakalo omkhulu, njengoba kwaba njalo ngeSiphepho uMathewu. Ngokuqondene namagamaokungukuthi, zisungulwa isikhathi esiyiminyaka eyi-6. Ngale ndlela, iSiphepho uMathewu esihlasele ezindaweni ezifana neHaiti, iCuba noma ugu lwase-Atlantic e-United States kulezi zinsuku sithola lelo gama ngoba yisiphepho seshumi nantathu sonyaka.
Ngaphambi kokuba kuhlasele iSiphepho uMatthew, uKatrina wayebhekwe njengonamandla kakhulu nocekela phansi eminyakeni yamuva. Lesi siphepho sakha ngo-2005 sabulala abantu ababalelwa ku-1.800 XNUMX e-United States. Ngaphezu kwalokhu, abantu abangaphezu kwesigidi basala bengenamakhaya futhi umonakalo wezinto ezibonakalayo wedlula ama-dollar ayizigidi ezingama-150.000.
Kumele futhi sikhumbule iSiphepho uMitch, okwathi ngo-1998 sabulala abantu abangu-9.000 290 emazweni aseMelika Ephakathi njengeHonduras neNicaragua. Ngenxa yemimoya edlula amakhilomitha angama-XNUMX ngehora, abantu abayizigidi ezimbili nohhafu basala bengenalutho kwadingeka ukuthi bathuthele kwezinye izindawo bayohlala.
Iziphepho azikwazi ukwenzeka eSpain kwazise amanzi olwandle ayabanda impela ngakho-ke, kuphela izivunguvungu ezinamandla athile ezingakha. Iziphepho zidinga amazinga okushisa aphakeme olwandle ukuze zikwazi ukwenzeka njengoba kwenzeka kuyo yonke indawo yase-Atlantic noma ePacific.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Kungani kungekho ziphepho eSpain
Ukwenza iplanethi ibe luhlaza futhi ukuze ikwazi ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu